Pillow Block Ball Bearing Manufacturers , Suppliers - China Pillow Block Bhora Bearing Factory
Series inopinza iine yakakwira chaiyo UCP 200
● Rigid integral structure, nyore kuisa.
● Mhete yemukati yakafara: inobatsira kune jacking lock, yakaoma zviri nani.
● Taya yepamusoro: waya mbiri dzepamusoro neAngle ye 120 degrees pane mhete yemukati kuitira kuti zvive nyore kusungirirwa kwekutakura kune shaft.
● Kuchengetedza mhete: pane imwe kumativi ose maviri, ichabudirira kuvhara guruva.
● Bata rubber seal: iyo yakaiswa mukati mekuchengetedza zvindori kumativi ose maviri kusvika.
Yemhando yepamusoro pinza inobereka nedzimba UCP X00
Series dzimba dzine UCP300
Mugadziri spherical radial anopinza bhora rine UCF
Outer spherical bearing with seat is a bearing unit iyo inosanganisa rolling bearing and bearing seat.Mazhinji ekunze spherical bearing idhayamita rekunze redenderedzwa, uye ine denderedzwa remukati gomba rine dzimba dzakaiswa pamwechete, chimiro chechimiro chakasiyana, chepasi rose uye chakanaka chekuchinjana.
Mutengo wemakwikwi anoisa ane UCFX00
Dimensions ari pakati UCF200 uye UCF300, kwete kunyanyo diki, chaiyo chiito parameter uye dhizaini zvakafanana, ndiwo musiyano pamusoro dimension, kana vasina chinodiwa pakati kureba, anogona kutsiva kazhinji.
XRL mhando yakakwira chaiyo pillow block ine UCFC
Iyo yepasi pevhu inopihwa neye denderedzwa boss, iyo inogona kuiswa mudenderedzwa gomba re rack, saka iyo yekumisikidza chaiyo yakakwira uye chinzvimbo chakarurama.
Chikwata chine chirafu chigadzirwa chinoumbwa nebhegi, bhagi rinotakura nehombe uye bhegi rinotakura nemakumbo pamusoro pepamusoro pepamusoro.
Stainless simbi inopinza inotakura block UCFL 200
Chimiro chacho chakareruka uye chiri nyore kuisa, chakakodzera nzvimbo duku yezvikamu zvekutumira.Hunhambwe hwepakati hwemaburi maviri ebhaudhi hunopindirana nepakati pechinhambwe cheskweya seat diagonal bolt maburi emhando imwe chete.
UCFL mashandisirwo makuru: kuisirwa diki nzvimbo saizi yemuchina, roller conveyor, muchina wechikafu, mishonga yemishonga, nezvimwe.
XRL brand china yakakurumbira inobereka UCFL X00
Chimiro chacho chakareruka uye chiri nyore kuisa, chakakodzera nzvimbo duku yezvikamu zvekutumira.Chinhambwe chepakati chemaburi maviri ebhoti chinopindirana nepakati chinhambwe cheskweya chigaro diagonal bolt maburi emhando imwe chete.
Mutengo wemakwikwi emhando yepamusoro pinza une UCFL 300
XRL mhando yemhando isa mabearings UCT200
Iyo inotsvedza inokodzera maapplication anoda shaft kugadziridzwa uye bhandi tensioning zvishandiso, senge conveyor application.Iine mafomu maviri: chigaro chesimbi inotsvedza block uye yakadhindwa simbi inotsvedza block seat;Imwe neimwe fomu ine akasiyana ekuvhara masisitimu ekusarudza kubva.Cast iron slide blocks yakakodzera kune yakajairwa mitoro maapplication;Iyo gondohwe simbi inotsvedza block inokodzera zvehupfumi uye mwenje mitoro yekushandisa.
Block pinza ine UCT300
Ruzha rwakaderera uye isa mabhengi ane yakakwira chaiyo UCC
Yakapihwa nesimbi uye rabha marudzi maviri echigaro chemhete, uchishandisa gumi giredhi yekuparadzanisa bhora resimbi uye super yekupedza mujaho, inogona kutsigira imwe mafuta ekuzora firimu, kuderedza ruzha.